इटहरी नमुना कलेजका विधार्थीलाई उत्प्रेरणा जगाउदै क्याप्टेन विजय - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र ०६, २०७६ समय: ७:२७:२९
इटहरी/ इटहरी नमुना कलेजको आयोजनामा इटहरीमा विद्यार्थीहरुका लागि लक्षित गरी मोटिभेसन सेमिनार सम्पन्न भएको छ । मोटिभेसन सेमिनारमा क्याप्टेन विजय लामा , मोटिभेसनल स्पिकर सौनक भट्ट र कलाकार सन्दीप क्षेत्रीले विद्यार्थीहरुलाई उत्पेरणा जगाउनु भएको छ ।
इटहरी नमुना कलेजका विद्यार्थीहरुलाई क्याप्टेज विजय लामाले विद्यार्थीको करिअर निर्माणमा संघर्ष र साधनाले सफल बन्न सकिने उत्पेरणा जगाउनु भएको हो । यस्तै कार्यक्रममा क्याप्टेन लामाले सामाजिक सन्जालको गलत प्रयोगले युवाहरु नकारात्मक कुरामा फस्दै गएको बताउनु भयो । उहँले संसारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति मानब मस्तिष्क भएकाले यसको सहि प्रयोगले मात्र सफलता हात पार्न सकिने बताउनु भयो । क्याप्टेज लामा हरेक लाई प्रेरणाकोे आवश्यता रहेको बताउनु भयो ।
हजारौं व्यक्तिलाई उत्प्रेरणा प्रदान गरिसकेका मोटिभेसनल स्पिकर ‘लाइफ कोच’का रूपमा परिचित सौनक भट्टले इटहरी नमुना कलेजका विद्यार्थीहरुलाई के पढ्ने ? किन पढ्ने ? कसरी पढने ? कस्ता साथी बनाउने ? कस्तो बानी व्यहोरा अपनाउने ?लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा अत्यन्तै रोचक प्रस्तुतिका साथ उत्पेरणा जगाउनु भएको छ । मानसीक समस्या बाट बाहर आउनको लागी उत्पेरणाको आवश्यक्ता रहेको उहँले बताउनु भयो । भट्टले नमुना कलेजका विद्यार्थीहरुलाई केही गर्न उत्पेरणा जगाउनु भएकोे छ ।
उत्प्रेरणाले मानिसले देख्ने संसार फराकिलो बनाउन सिकाउँछ र स–साना समस्यालाई बिर्साउँछ । उत्प्रेरणा मानिस मृत्युशय्यामा लड्दासम्म चाहिने विज्ञहरुले बताउदै आएका छन । विद्यार्थीहरु मा सकरात्मक उर्जालाई वृद्धि गर्न, जिवनको लक्ष्यको बारेमा बुझाउन, यस सेमीनार फलदायी भएको इटहरी नमुना कलेजका अध्यक्ष केसब खड्काले बताउनु भयो । विद्यार्थीहरुको व्यबहारमा सकारात्मक परिवर्तनसँगै नेतृत्व विकास र क्षमता अभिबृद्धिमा सहयोग पुगोस भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको इटहरी नमुना कलेजले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रम इटहरी स्थित इमेरियम होटलमा भएको थियो । नमुना कलेजमा उच्च माविमा विज्ञान, व्यवस्थापन, होटल म्योजमेन्ट , शिक्षा , लगायतका विषय संकायमा पढाइ हुने गर्छ । त्यस्तै स्नातक तहमा विविए , बिबिएस, व्याचुलर इन होटल म्यानेजमेन्ट , व्याचुलर इन कम्प्युटर एप्लीकेसन , व्याचुलर इन सोसीएल वर्क (बिएसडब्लु) र विए , अध्यापन हुने गरेको छ । त्यतीमात्र होइन यस कलेजमा एमबिए तथा विविए कार्यक्रम भने लिङकन विश्वविद्यालयको सम्वन्धनमा सञ्चालनमा रहेको छ ।